ဗိုက်ထဲမှာ ရစ်နေတဲ့လေတွေကို ဘယ်လို ထုတ်ကြမလဲ – DVB
ဗိုက်ထဲမှာ ရစ်နေတဲ့လေတွေကို ဘယ်လို ထုတ်ကြမလဲ
Published By DVB | 17 February, 2019
ဗိုက်ထဲလေပွပြီး လေအောင့်တတ်တဲ့သူတွေရှိကြတယ်မလား။ လေကလည်း ပွ၊ ပွနေတဲ့လေတွေကလည်း အပြင်ကို မထွက်ဘဲ ဗိုက်ထဲမှာပဲ လည်နေတဲ့ ခံစားချက်ကြီးက တကယ်ကို မသက်မသာဖြစ်စေတယ်လေ။ ဒီလို အပြင်လည်း မထွက် အထဲမှာပဲ လည်နေတဲ့လေတွေကိုကြောင့် ပေါ်လာတဲ့ ဗိုက်အောင့်၊ လေထိုးလေအောင့်တယ်ဆိုတဲ့ ဝေဒနာကို ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ အမြန်ဆုံး သက်သာအောင် လုပ်ကြမလဲ ။ ။ အပြင်မထွက်ဘဲ အထဲမှာပဲ လည်နေတဲ့ လေတွေကို အမြန်ဆုံး ထုတ်နိုင်မယ့် အချက် များ ။ ။
လေထုတ်ပါ။ အထဲကလေ အပြင်ကို ထွက်ပါစေ ။ ။
ဗိုက်ထဲမှာ လေပွတင်းနေပြီး လေထိုးလေအောင့် ပါထပ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် တော့ ဒီလေတွေကို အပြင်ကိုထွက်စေဖို့ နည်းမျိုးစုံနဲ့လုပ်ကိုလုပ်ပေးမှာရမှာပါ ။ လူကြားထဲရောက်နေလို့ဆိုပြီး လေလည်ရမှာရှက်ပြီး မချုပ်ထားပါနဲ့။ လေကို အပြင်ပေးမထွက်လို့ ပြန်ဝင်သွားတဲ့အခါ နောက်ပိုင်းဖြစ်လာမယ့် လေထိုး လေအောင့် လေချုပ်တာက ပိုးဆိုတယ်နော်။
ဝမ်းမှန်အောင်လုပ်ပါ ။ ။
ဝမ်းချုပ်ပြီး စမြင်းတုံးတွေ ခံနေလို့ အထဲကလေ အပြင်ကို မထွက်နိုင်တာလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဝမ်းမှန်အောင် အမျှင်ဓာတ်တွေ များများစားပါ။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်ပေးပါ။ ရေများများသောက်ပါ.
အစားကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ဝါးစားပါ ။ ။
အစားကို မြန်မြန်စားတာ၊ လှုပ်ရင်းရှားရင်း အစားစားတွေ၊ အစားစားစဉ် စကားပြောတာတွေကြောင့် အစာနဲ့အတူ ဗိုက်ထဲကို လေတွေဝင်သွားတတ်ပါတယ်။ မြန်မြန်စားထားပြီး သေချာဝါးမထားတော့ အစာတွေ မကြေလို့ လေအောင့်နိုင်တဲ့ အပြင် အပြင်ကလေတွေပါဝင်သွားတော့ လေတွေပိုပွတော့တာပေ့ါ။ ဒါကြောင့် ရှေးလူကြီးတွေက အစားကိုဖြည်းဖြည်းဝါးခိုင်းပြီး ထမင်စားပွဲမှာ စကားမပြောခိုင်းတာ ထင်ပါရဲ့။
ပီကေမဝါးပါနဲ့ ။ ။
လေထိုးလေအောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့သူတွေ အနေနဲ့ ပီကေဝါးတာကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။ ပီကေဝါးတဲ့အခါ အပြင်ကလေတွေ ဗိုက်ထဲကို ဝင်နိုင်တဲ့အပြင် ပီကေမှာပါတဲ့ သကြားအတုတွေကြောင့် လေထတာကို ပိုဖြစ်စေပါတယ်။
ရေပိုက်နဲ့ ရေမသောက်ပါနဲ့။ ။
ရေကို ဖန်ခွက်ထဲ ထည့်သောက်တာကသာ အကောင်းဆုံးပါ။ ပိုက်ထည့်ပြီးရေသောက်တာရော ရေဘူးထဲကရေကို စုပ်သောက်တာရောက အပြင်ကလေတွေကို အထဲပိုဝင်စေပါတယ်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ ။ ။ စီးကရက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဖက်ကြမ်းဆေးလိပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ VAPE ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆေးလိပ်အနွယ်ဝင်အားလုံးကို သောက်ပြီဆိုတည်းက လေကို ရှိုက်ပြီးသောက်ရပါတယ်။ ဒီလို လေကို ရှိုက်လိုက်ပြီဆိုတည်းက အပြင်ကလေတွေ ဗိုက်ထဲကို ဝင်မှာ ကျိန်းသေပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်က အစတည်းက လေအောင့်တတ်တဲ့သူဆိုရင် ကျန်းမာရေးအတွက် ဘာကောင်းကျိုးမှ မပေးတဲ့ ဆေးလိပ်ကို ဖြတ်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါ။
လေထစေတတ်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို ရှောင်ပါ။ ။
အဆီများတဲ့ အစားအစား၊ စပ်လွန်းတဲ့ အစားအစာတွေ ၊ နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေ၊ နဲ့ ပဲအမျိုးမျိုးတို့ဟာ လေထစေတတ်တဲ့ အစားအသောက်တွေဖြစ်တာကြောင့် လေအောင့်တတ်တဲ့သူတွေ အနေနဲ့ ဒီလို အစားစားတွေကို ရှောင်စားဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
ဗိုက်အောင့်လွန်းတဲ့အခါ ရေနွေးအိတ်ကပ်လိုက်ရင် ရေနွေးအိတ်ကပူတဲ့အပူရှိန်ကြောင့် ဗိုက်က ကြွက်သားတွေ ပြေလျော့သွားလို့ လေတွေ လွယ်လွယ်ကူကူ အပြင်ကို ထွက်သွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ လေအောင့်တာကိုပါ သက်သာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းမှာ ဘာပြဿနာတွေရှိလဲဆိုတာကို အဖြေရှာပါ ။ ။
အစာအိမ် အနာဖြစ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အူရောင်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အူလမ်းကြောင်း လှုပ်ရှားမှု မမှန်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးက အစာမကြေ လေထိုးလေအောင့်တာကို ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းတရားတွေပါ။
အကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယားတွေ ပါတဲ့ အစားအသောက်တွေ များများစားပေးပါ ။ ။
အူတွင်းက အကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယားတွေကို အားပေးတဲ့ အစားအစာတွေ များများစားပေးပါ။
တစ်ချိန်လုံးထိုင်နေရင် သင့်ကိုယ်ခန္ဓာလည်း လှုပ်ရှားမှု မရှိသလို သင့်အူတွေလည်း အညောင်းမိပြီး အပျင်းကြီးနေပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို လှုပ်ရှားမှု မရှိတဲ့ အူတွေကနေ လေတွေ ထုတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါ။
လေအောင့်တာကို လုံးဝကို မနိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာ လေနိုင်ဆေး၊ လေကွဲဆေးတွေ သောက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ လေထိုးလေအောင့် ဖြစ်လို့ ကြံရာမရဖြစ်နေတဲ့ အခါမျိုးမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီးရေးသားလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ။ ရေးသားသူ Dr. Thin Yadanar @ Frances ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win ဤဆောင်းပါးကို DVB ၏ မိတ်ဘက် ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာဝက်ဘ်ဆိုဒ် hellosayarwon.com မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။